काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको दल कसको भन्ने विवादको निर्णय यही फागुन २० गते दिने भएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा बिहिबार नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) ले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएका विवादमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएपछि फैसला सुनाउने मिति तोकिएको हो ।
प्रचण्डलाई भेटेर बामदेवले यसो भने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन् । नेकपा मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै पार्टी एकता अभियान थालेका नेता गौतमले बिहीबार बिहान प्रचण्डसँग खुमलटारमा भेट गरेका हुन् ।
ओलीको अबको रणनीति !
काठमाडौँ । नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आआफ्नो रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको फैसलापछि निर्धारित अवधिभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउन तयार देखिएका छन्। तर, तत्काल राजीनामा दिनेतर्फ भने सकारात्मक देखिएका छैनन्। ओली आफूमाथि आइपर्ने संकट संसद्बाटै सामना गर्ने गरी अगाडि जान खोजेका छन्।
ओली समुहको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा के के भयो कुराकानी ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपाको खुशीयाली सभाः अब मुलुक संविधानबाट चल्छ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक ठह¥याउँदै पुनःस्थापना गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आज राजधानीमा खुशीयाली जुलुस निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्ः जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्न तयार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
'नेकपाले आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्दा देश नै सङ्कटमा प¥यो'
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आएको समस्या सो दलमा मात्र सीमित नभएको बताएका छन् । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ बागलुङले आज बागलुङमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले संविधानको रक्षा, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्य र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पनि नेकपा विवादको असर पर्ने जनाए ।
विष्णु रिजाल भन्छन्ः प्रधानमन्त्री ओलीका तीन कदम ‘नोट’ गर्न योग्य छन्
काठमाडौँ । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तीन कदम ‘नोट’ गर्न योग्य भएको बताएका छन् । आइतबार दिउँसो फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै उनले तिनै तीन कदमबाट नेकपाको आधिकारिकता कसले पाउँछ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे सहजै अनुमान लागउन सकिने बताएका हुन् ।
बादल, भट्ट र रायमाझी सरकारबाट बाहिरिने !
काठमाडौँ । नेकपाको ओली समूहमा रहेको तीन नेताले मन्त्री पद त्याग्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । आफूहरु पूर्व माओवादी पृष्ठभूमीको भए पनि ओलीलाई साथ दिन आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्रिपरिषद्‌बाट हट्ने संकेत गरेका हुन् ।